Momba anay | Jiande Welfine Import & Export Co., Ltd.
Ny JIANDE SINFINE POWDER METALLURGY FACTORY. Any amin'ny tanàna HangZhou Jiande novolavolaina ara-toekarena, natsangana tamin'ny taona 2001, Welfinehas dia atrikasa namboarina 5000 metatra toradroa, ny famokarana isan-taona 500 taonina.
Izahay dia manam-pahaizana manokana amin'ny metallurgy vovoka miaraka amin'ny traikefa 17 taona miaraka amin'ny dera, ny quanlity ary ny fahamendrehana eo amin'ity sehatra ity. Misy vokatra an'arivony no novokarina, fanondranana any Japon, Danemark, Netherlands ary Etazonia, sns.
Manana ny ekipa fikarohana sy fampandrosoana izahay. Ny vokatra vaovao rehetra dia manana fanohanana ara-teknika matanjaka ao aoriany.
Miaraka amin'ny milina mandeha ho azy hydraulic, pressers mekanika mandeha ho azy, lafaoro banga, masinina EDM avo lenta, Lathe,lafaoro varahina miempo,Fitaovana fametahana CNC, milina sns.
Vokatra Preponderant: fitondra mandrehitra tena, fitaovana miendrika sinter,faritra hafa rafitra mekanika & ny vy vy alimo bushing, ny vy fandatsahana varahina vozon'akanjo, vy varahina mitambatra bushing, mpitari-dalana napetraka ny billet.
Manana fitaovana fanaraha-maso tonga lafatra isika: milina fitsapana manerantany, milina fitiliana am-pahefana, fitaovana henjana, fitaovana hakitroka, metalloscope, fitaovana elektrika optika, spectrograph,etc.
ISO9001: rafitra fitantanana kalitao 2000 voamarin'ny IQNet sy CQC.
Ny bearings manosotra tena rehetra natolotry ny Wel fine dia nifanaraka tamin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fananana simika sy ara-batana, toy ny ASTM, JIS, DIN, MPIF, SAE, GB…